DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha ee Khamiista 08 Agoosto 2018 - Afrika - WAA KU SAAMEEYA
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS »DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha ee Khamiista 08 Agoosto 2018 - Afrika
DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha ee Khamiista 08 Agoosto 2018 - Afrika
- Bedelka uu Raiiselwasaaraha Ilunga Ilunkamba rumeysan yahay in ay tahay hareyda ugu habboon, dhinacyo badan, in ay dowladdu ku siiso hoggaamiyeyaal lagu kalsoonaan karo. Wuxuu ku guuleysan doonaa khayaanadiisa kadib wada tashiyo marathons ah oo ku saabsan deg-degga si loo bogsiiyo dhaawacyada ay ka tageen maamulayaasha musuqmaasuqa ah iyo sameynta diiwaanno qosol leh ee shaqsiyaadka si aan mar dambe loo arag ganacsi. In kasta oo ay jirto xaqiiqda jirta in sugitaanka dheer ee Dowladdu ay ku reebtay wax kasta oo laga filan karo.
Hay'adda PRESS CONGOLESE AGENCY ayaa ku soo bandhigeysa daboolka ka qaadaysa in Ra'iisul-wasaare Ilunga Ilunkama uu dejinayo shuruudaha "Qunyar yar" dowladiisa. Sida ku xusan qoraalka maalinlaha ah, kartida, sharafta, awooda wada shaqeynta kooxda, waa shuruudo looga dhigo "wasiir" dowlada jamhuuriyada, waxaa ku cadeeyay Raiisul wasaaraha Ilunga Ilunkama, dukumenti lagu wareejiyay Arbacada. ACP.
Hay'aduna waxay sii wadaa, sida ku xusan dukumintiga, doorashada "Wasaarado"Iyada oo qayb ka ah isbahaysiga CACH-FCC, waa in ay raacdaa shuruudaha soo socda: ma aha in ay ahaato mowduuc xukun xukun adag ku soo rogo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo (DRC) ama dibedda, si loo hubiyo in sumcadda guud ee hiddaha iyo in isku dheelitirka juquraafi ahaaneed, waxay u diraan farriin wanaagsan dadka naafada ah, waxay awood u leeyihiin inay ku hoos shaqeeyaan awoodda Ra'iisul Wasaaraha isla markaana ay saxiixaan heshiis wax-qabad oo u dhexeeya wasiirka iyo madaxa xukuumadda.
Sidaas oo kale, L'AVENIR ayaa soo jeedineysa cinwaan weyn oo ah in Ilunkamba uu ku soo rogo toban xaaladood wasaaradaha. Sida laga soo xigtay wargeyska maalinlaha ah ee Avenue Bas-Congo, waa sidii loo ballan qaaday. Raiisel wasaaraha ayaa bilaabay wadatashiyo rasmi ah oo ay ku mideysan yihiin madasha wadajirka ah ee loo yaqaan 'The Front Front for Congo iyo Cape for Change' oo loo maro isuduwayaashooda.
In kasta oo adkeyneysa rabitaankeeda ah in la arko wejigan wada-tashiga sida ugu macquulsan, maxaa yeelay dadka reer Kongo waxay horey u sugayeen Dowladdan dheer, Sylvestre Ilunga waxay ku wareejisay Néhémie Mwilanya iyo Jean-Marc Kabund jadwalka jadwalka dhismaha Dowladda. iyo taxanaha wadajirka ah ee loogu talagalay magacaabista wasaaradaha ku jira qaab dhismeedka isbaheysiga 'FCC-CACH', ayay qortay L'AVENIR.
Dawlad: dhalasho xanuun, cinwaan AHAANSHAHA cinwaanka weyn. Maalgaliyay ilaa Janaayo 24 2019, madaxa gobolka, Felix Tshisekedi, wuxuu wali ka shaqeynayaa samaynta dowladdiisa ugu horeysay ee hoggaamin doonta Professor Sylvestre Ilunga Ilunkamba, oo loo magacaabay jagadan 20 May 2019, wuxuu xusuustaa wargeyska maalinlaha ah ee Avenue. Hoose Congo.
DIIWAANKA DES AS waxay muujineysaa wax ku saabsan Dowladda Ilunkamba in halkaan la joogo qareenka. Dhanka wargayska maalinlaha ah ee Limete, hadafku waa in dalka la siiyo maamul fulineed oo gacan ka geysan kara hagaajinta xaaladaha nololeed ee dadka reer Kongo, ayuu yidhi Raiisel Wasaaraha maalinimadii 1er.
QIIMAHA, iyada oo FCC iyo CACH ay hadda ku heshiinayaan qaybinta jagooyinka, Ra'iisul Wasaaraha ayaa helay tegitaanka wadahadalada u dhexeeya dhinacyada kala duwan ee isbahaysiga talada haya.
Shalay Arbacadii, madaxa dawladdu wuxuu dhigay mabda'a lagu sheeganayo jago ka jira dowladdiisa, iyadoo ballan-qaaday in wax walba la xiri doono dhammaadka toddobaadkan. Xanuun ayay ku jirtaa in la soo dhiso dowladda Ilunga Ilunkamba, ayaa aaminsan qirashada.
MADAXWEYNAHA ayaa ka muuqda bogga hore: Dowladda, Sylvestre Ilunga ee Félix Tshisekedi Talaadada soo socota. Shalay, Arbaco, Agoosto 7, wadatashiyadii rasmiga ahaa runtii waa la bilaabay, iyada oo la fiirinayo dhismaha dowladda soo socota ee Jamhuuriyadda.
Wufuudda labada meelood ee siyaasadeed ee isbaheysiga 'CACH-FCC', waxaa qaabilay Raiisul Wasaaraha, Sylvestre Ilunga, '' waqtigaan oo dhan caqabadaha iyo mowqifyada oo dhan '', laftiisa waxay siisaa hadaf ' in lagu soo afjaro dalka iyada oo dowladdu ka kooban tahay rag iyo dumar karti leh, daacad ah oo go’aansaday in ay ka shaqeeyaan sidii ay gacan uga geystaan ​​hagaajinta xaaladaha nololeed ee muwaadiniinta reer Kongo ”.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu ku talajiraa inuu u soo gudbiyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda nooca loo yaqaan dowladda Talaadada 13 Agoosto 2019, wuxuu muujinayaa wargeyska maalinlaha ah ee Mont-Fleury.
DRC: 09 Dib-u-eegista Wargeysyada Shiinaha ee Agoosto 2019 - Afrika